Mischievous Children - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဒီကလေးနှယျ! ပွောမရဆိုမရ.. ခြော့မရ ခွောကျမရနဲ့! ငါ့နှယျ စိတျတှလေညျးကုနျပါတယျ
ဒါတှကေ မဆနျးတော့တဲ့အသံတှေ။ဘေးအိမျမှ ဒျေါဘုမတဈယောကျ သူ့သားနဲ့တိုကျပွှဲဖဈနသေံ။ဟုတျတော့လညျး ဟုတျသညျ။သားဖွဈသူက ခုမှ အသကျ4နှဈစှနျးစှနျး။ကဲခကျြက မြောကျရှုံးသညျ။အမရေော အဖရေောမနိုငျ။ရိုကျလညျး ရိုကျရိုကျပဲ။အကွောအတျောမာသညျ။ဒီလိုကလေးမြိုးတှေ ပတျဝနျးကငျြမှာမနဲရှိသညျ။
သို့သျော သူတို့ကို ဘယျလိုကိုငျတှယျရမလဲဆိုတဲ့ နညျးလမျးတှကေိုသိထားရငျတော့ ဒျေါဘမလို ဆူနေ ရိုကျနစေရာမလိုဘဲ ထိနျးသိမျးဆုံးမဖို့လှယျပါသညျ။ရိုးရှငျးလှယျကူတဲ့ အောကျပါနညျးလမျးလေးတှကေ ကလေးဆိုးကလေးမြားကို လိမ်မာစဖေို့ အထောကျအကူပွုစမေညျဖွဈသညျ –
အခြို့ကလေးတှဆေိုးတယျဆိုတာ မိဘဆီက ဂရုစိုကျမှုလိုခငျြကွလို့ဖွဈပါတယျ။မိဘတှအေနနေဲ့ သူတို့အပျေါ ခဈြကွောငျးဂရုစိုကျကွောငျးပွသခွငျးဖွငျ့ ကလေးဆိုးလေးတှကေို ထိနျးခြုပျရလှယျကူလာပါလိမျ့မယျ။သို့သျော အရမျးအလိုလိုကျရမညျဟုမဆိုလိုပါ။ပွောဆိုဆုံးမစရာရှိလာပါက ခပျတငျးတငျးပွောပါ။
– ကလေးအား နားလညျမှုပေးပါ။
ကလေးရဲ့အသကျအရှယျ၊အခွအေနပေျေါမူတညျပွီး ဖွဈလဖွေ့ဈထရှိတဲ့ ခံစားခကျြတှကေို နားလညျပေးပါ။
– စညျးကမျးကွပျမတျပါ။သို့သျော မခြုပျခယျြပါနှငျ့။
ကလေးမြားအား သူတို့ကို လှပျလပျခှငျ့ပေးထားသညျ့ အတိုငျးအတာကို ရှငျးလငျးစှာပွောပွထားပါ။အရာရာတဈခုခငျြးကွညျ့ပွီး အပွဈတငျဆုံးမခွငျးမပွုဘဲ မိမိသတျမှတျပေးထားသောေ ရှိသငျ့ရှိထျုကျသညျ့ ဘောငျအတှငျး လှပျလပျခှငျ့ပေးထားပါ။
– ကောငျးမှနျတဲ့အမူအကငျြ့လေးတှကေို လကေ့ငျြ့သငျကွားပေးပါ။
ငယျစဉျကတညျးက အမူအကငျြ့ကောငျးလေးတှေ သငျကွားပေးပါ။ကလေးဆိုးလာမှ ဆုံးမခွငျးထကျ အစောအလငျြတညျးက ပွောပွဆုံးမထားခွငျးက ပိုအကြိုးရှိစပေါလိမျ့မယျ။မိမိကိုယျတိုငျလညျး ကလေးအတှကျ စံပွဖွဈပါစေ။ကလေးကို မရိုငျးစခေငျြပါက မိမိကိုယျတိုငျ ကလေးရှတှေ့ငျ ရုနျ့ရငျးကွမျးတမျးသော အပွောအဆို အပွုအမူမြားကို ရှောငျကွဉျပါ။
ကလေးအပျေါဒေါသတကွီးတုနျ့ပွနျခွငျးက မှနျကနျတဲ့နညျးလမျးမဟုတျသလို ဤနညျးလမျးက သငျ့ကလေးကို လိမ်မာမလာစတေဲ့အပွငျ သငျနဲ့ကလေးကွား ပိုမိုဆိုးရှားတဲ့အခွအေနတေဈခုရောကျရှိသှားနိုငျပါတယျ။
– ကလေးအပျေါ အလေးထား လေးစားပါ။
လူကွားသူကွားထဲတှငျ ဆူငေါကျခွငျး၊အျောခွငျး၊ရိုကျနှကျဆုံးမခွငျးမြားသညျ ကလေးအားအရှကျရစသေဖွငျ့ လုံးဝရှောငျကွဉျပါ။အရငျက ပွုလုပျခဲဖူးသော အမှားအပွဈမြားကို မကွာခဏပွနျလညျပွောဆိုခွငျး၊အကွိမျကွိမျအပွဈတငျခွငျးမြား မပွုလုပျသငျ့ပါ။ကလေးမှ ကောငျးတဲ့အပွုအမူ လုပျရပျတဈခုလုပျတဲ့အခါ “သားလေးကတျောလိုကျတာ” ၊ “သမီးလေးက လိမ်မာလိုကျတာ” စသဖွငျ့ အသိအမှတျပွု ခြီးကြူးစကားဆိုခွငျးဖွငျ့ ကလေးအား သူ့ကိုယျသူယုံကွညျမှုပိုရှိစသေညျ့အပွငျ မိမိစကားလညျး ပိုမိုနားထောငျလာမညျဖွဈသညျ။
ဒီကလေးနှယ်! ပြောမရဆိုမရ.. ချော့မရ ခြောက်မရနဲ့! ငါ့နှယ် စိတ်တွေလည်းကုန်ပါတယ်
ဒါတွေက မဆန်းတော့တဲ့အသံတွေ။ဘေးအိမ်မှ ဒေါ်ဘုမတစ်ယောက် သူ့သားနဲ့တိုက်ပြွဲဖစ်နေသံ။ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်သည်။သားဖြစ်သူက ခုမှ အသက်4နှစ်စွန်းစွန်း။ကဲချက်က မျောက်ရှုံးသည်။အမေရော အဖေရောမနိုင်။ရိုက်လည်း ရိုက်ရိုက်ပဲ။အကြောအတော်မာသည်။ဒီလိုကလေးမျိုးတွေ ပတ်ဝန်းကျင်မှာမနဲရှိသည်။
သို့သော် သူတို့ကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေကိုသိထားရင်တော့ ဒေါ်ဘမလို ဆူနေ ရိုက်နေစရာမလိုဘဲ ထိန်းသိမ်းဆုံးမဖို့လွယ်ပါသည်။ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ အောက်ပါနည်းလမ်းလေးတွေက ကလေးဆိုးကလေးများကို လိမ္မာစေဖို့ အထောက်အကူပြုစေမည်ဖြစ်သည် –
အချို့ကလေးတွေဆိုးတယ်ဆိုတာ မိဘဆီက ဂရုစိုက်မှုလိုချင်ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေအနေနဲ့ သူတို့အပေါ် ချစ်ကြောင်းဂရုစိုက်ကြောင်းပြသခြင်းဖြင့် ကလေးဆိုးလေးတွေကို ထိန်းချုပ်ရလွယ်ကူလာပါလိမ့်မယ်။သို့သော် အရမ်းအလိုလိုက်ရမည်ဟုမဆိုလိုပါ။ပြောဆိုဆုံးမစရာရှိလာပါက ခပ်တင်းတင်းပြောပါ။
– ကလေးအား နားလည်မှုပေးပါ။
ကလေးရဲ့အသက်အရွယ်၊အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ခံစားချက်တွေကို နားလည်ပေးပါ။
– စည်းကမ်းကြပ်မတ်ပါ။သို့သော် မချုပ်ချယ်ပါနှင့်။
ကလေးများအား သူတို့ကို လွပ်လပ်ခွင့်ပေးထားသည့် အတိုင်းအတာကို ရှင်းလင်းစွာပြောပြထားပါ။အရာရာတစ်ခုချင်းကြည့်ပြီး အပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းမပြုဘဲ မိမိသတ်မှတ်ပေးထားသောေ ရှိသင့်ရှိထ်ုက်သည့် ဘောင်အတွင်း လွပ်လပ်ခွင့်ပေးထားပါ။
– ကောင်းမွန်တဲ့အမူအကျင့်လေးတွေကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါ။
ငယ်စဉ်ကတည်းက အမူအကျင့်ကောင်းလေးတွေ သင်ကြားပေးပါ။ကလေးဆိုးလာမှ ဆုံးမခြင်းထက် အစောအလျင်တည်းက ပြောပြဆုံးမထားခြင်းက ပိုအကျိုးရှိစေပါလိမ့်မယ်။မိမိကိုယ်တိုင်လည်း ကလေးအတွက် စံပြဖြစ်ပါစေ။ကလေးကို မရိုင်းစေချင်ပါက မိမိကိုယ်တိုင် ကလေးရှေ့တွင် ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းသော အပြောအဆို အပြုအမူများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ကလေးအပေါ်ဒေါသတကြီးတုန့်ပြန်ခြင်းက မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းမဟုတ်သလို ဤနည်းလမ်းက သင့်ကလေးကို လိမ္မာမလာစေတဲ့အပြင် သင်နဲ့ကလေးကြား ပိုမိုဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်။
– ကလေးအပေါ် အလေးထား လေးစားပါ။
လူကြားသူကြားထဲတွင် ဆူငေါက်ခြင်း၊အော်ခြင်း၊ရိုက်နှက်ဆုံးမခြင်းများသည် ကလေးအားအရှက်ရစေသဖြင့် လုံးဝရှောင်ကြဉ်ပါ။အရင်က ပြုလုပ်ခဲဖူးသော အမှားအပြစ်များကို မကြာခဏပြန်လည်ပြောဆိုခြင်း၊အကြိမ်ကြိမ်အပြစ်တင်ခြင်းများ မပြုလုပ်သင့်ပါ။ကလေးမှ ကောင်းတဲ့အပြုအမူ လုပ်ရပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါ “သားလေးကတော်လိုက်တာ” ၊ “သမီးလေးက လိမ္မာလိုက်တာ” စသဖြင့် အသိအမှတ်ပြု ချီးကျူးစကားဆိုခြင်းဖြင့် ကလေးအား သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုပိုရှိစေသည့်အပြင် မိမိစကားလည်း ပိုမိုနားထောင်လာမည်ဖြစ်သည်။